UMDLALI weKaizer Chiefs u-Andriamirado Andrianarimanana okungacaci ngekusasa lakhe kwiKaizer Chiefs. Isithombe: BACKPAGEPIX
Sphamandla Gumede | August 22, 2019
Akucaci ngekusasa lomdlali weKaizer Chiefs Andriamirado ‘Dax’ Andrianarimanana osekuvele izindaba zokuthi akabhalisiwe ohlwini lwabadlali abazosetshenziswa yiqembu kule sizini. UDax (28) bekulindeleke ukuthi abolekiswe kwiBlack Leopards ekuqaleni kwesizini, kwagcina kungenzekanga ngenxa yezinkinga ezingadalulwanga.
IChiefs ibhalise uSamir Nurkovic, James Kotei, Daniel Akpeyi, Lazarous Kambole kanye noLeonardo Castro ohlwini lwabadlali abahlanu abavela emazweni angaphandle. Lo mdlali ubebalwa nalabo abamqoka eqenjini leChiefs ngesizini edlule njengoba bekungavamisile ukuthi eqiwe yijezi ngaphansi kobuholi kukaMiddendorp.
Inombolo ebigqokwa uDax (6) igcine inikezwe uKearyn Baccus osayiniswe kwiMelbourne City edlala e-Australia, kanti lesi sinqumo sidale ukuthi iningi labalandeli lingabaze indawo yalo mdlali eqenjini. UDax ubeyingxenye yeqembu leMadagascar ebeligijima kwi-AFCON kulo nyaka, eligcine likhishwe yiNigeria kuma-quartefinals.
IChiefs iyivule kahle isizini ngokubhuquzisa iHighlands Park kanye neBlack Leopards emdlalweni yeligi kwazise isibalwa namanye amaqembu ahleli phezulu kwiligi njengoba isiqoqe amaphuzu ayisithupha. Kuyona yomibili lemidlalo, uDax ubengabonwa nangokhalo okukhomba ukuthi lenjini edlala esiswini izofulathela kuleli qembu okanye isetshenziswe eqenjini elincane eligijima kwiMultiChoice Diski Challenge.
Omunye umdlali weChiefs ukusasa lakhe elisadingidwa namanje nguKhama Billliat ofunwa uthuli yiMamelodi Sundowns, noma iChiefs isiphumele obala yacacisa ukuthi lomdlali ayimdayisi.
Imizamo yokuthola uVina Maphosa ongumxhumanisi weKaizer Chiefs ayiphumelelanga njengoba ucingo lwakhe belukhala lungabanjwa.
Umphathi wezokuxhumana kwiPSL uLuxolo September usekuqinisekisile ukuthi Amakhosi abhalise abadlali abahlanu abavela emazweni angaphandle kodwa uDax akekho kulabo badlali, okuhambisana nomthetho (34,2) obhaliwe ezincwadini zeNSL.